Tips for refugees – Kayar da'da 18? Su'aalaha?
Boggaan internetka ah waxaa loogu talogalay gabdhaha iyo wiilasha da’ yarta ah.
Laakiin waxaa khasab kugu ah in aad ahaatid ugu yaraan 13 sanno jir.
Waxaan si joogto ah kugu siin doonaa macluumaad cusub.
Sidaas darteeda soo booqo inta badan boggeena internetka ah.
Waxaad jeclaan lahayd in aad ku dareentid dalka Jarmalka sida dalkaaga oo kale.
Haddaba waxaad u baahantahay in aad oggaatid sharciyada dalkaan u yaala.
Waana in aad baratid dhowr waxyaabood.
Waxaan doonaynaa in aynu midaasi kugu caawino.
Waxaa dhici karta in aynu si toos ah wax kuugu sheegno anaga oo aan isticmaalin sarbeebyo.
Waxaa dhici karta in waxyaabaha qaar kula noqdaan kuwo laga xishoodo ama laga yax-yaxo.
Qaar kamid ah waxyaabaha aynu qorno.
Anagu nagama ahan in aynu kuu gaysano wax dhibaato ah.
Waxaan kuugu cudur daaranaynaa si horumarin ah.
Laakiin oggoow waa muhiim in aad sidoo kale oggaatid waxyaabaha kusaabsan arimaha laga xishoodo ama laga yax-yaxo.
Waa in aad ku dareentid ammaan iyo raaxo dalka Jarmalka.
Waxaan doonaynaa in aynu kugu caawino in aad sidaasi dareentid.
FeaturedPosted on December 23, 2015 July 19, 2016 Author editorialteamCategories Basics